Faah Faahin: Al Shabaab oo in kabadan 10 Askar ku dilay deegaanka Bacaadweyn.
Saldhigyada ciidamada Jabuuti ee gobolka Hiiraan oo la weeraray.
Saxafi caan ah oo kamid noqday kumanaan qof American ah oo Carona udhintay.
Markab laga leeyahay dalka Turkiga oo lagu qafaashay xeebaha Nigeria.
Al Shabaab oo askar iyo saraakiil ku dilay xaafado katirsan Muqdisho.
Melleteriga Itoobiya oo kufsi jamaaci ah ka geystay gobolka Tigray.
Saturday July 18, 2015 - 12:09:22 in Wararka by Super Admin
(Rating 3.2/5 Stars) Total Votes: 66
Mu'asasada Al-kataib garabka warbaahineed ee xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa soo saartay filim maqal iyo muuqaal ah oo qeyb ka ah Silsiladda فَشَرِّدْ_بِهِمْ_مَنْ_خَلْفَهُمْ_12 oo aalaaba lagusoo bandhigo howlgal
Mu'asasada Al-kataib garabka warbaahineed ee xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa soo saartay filim maqal iyo muuqaal ah oo qeyb ka ah Silsiladda فَشَرِّدْ_بِهِمْ_مَنْ_خَلْفَهُمْ_12 oo aalaaba lagusoo bandhigo howlgallada mujaahidiinta ee ka dhanka ah ciidamada shisheeye iyo maleeshiyaadka la shaqeeya.
Isdaarkan ayaa lagusoo bandhigayaa dagaalkii xooganaa ee ciidamada mujaahidiintu xabashida Itoobiya kula galeen deegaanka Jameecada duleedka degmada Buurhakaba gobolka Bay.
Filimka ayaa lagu daawanayaan ciidamada mujaahidiinta oo la wareegaya gaadiidka dagaalka Cadawga Itoobiya,meydadka ciidamo itoobiyaan ah oo lagu laayay dagaalka iyo gaadiidka dagaalka mujaahidiinta oo ka qeyb qaadanaya howlgalka.
Halkan ka degso Filimka MP4
Halkan kala deg Tayo Sare MP4
Halkan ku daawo toyo Mobile MP4
Weeraro Askar Itoobiyaan ah lagu dilay oo ka dhacay deegaan katirsan gobolka Bakool.
Sarkaal katirsan Nabad Sugidda oo Muqdisho lagu dilay iyo warar kale.
Guddoomiyaha Sh/hoose oo si dirqi ah uga badbaaday qarax lagula beegsaday Balidoogle.
Duqeyn ka dhacday Jubbada hoose oo lagu dilay Suldaankii Beesha Habar Gidir.
Al Shabaab oo dib ula wareegay deegaan ay ka baxeen ciidamada AMISOM.
Taliye Max'med Dheere oo u dhintay dhaawac kasoo gaaray qaraxii Baardheere.
Sedax katirsan ciidamada AMISOM oo lagu dilay degmada Baraawe.
AFRICOM oo Al Shabaab ku eedeeyay in ay isku dayeen waxyeellaynta ciidamada Mareykanka xilligii ay isaga baxayeen Soomaaliya.
Xaflad loo qabtay Arday ka qalin jebisay Machadka Shareecada ee wilaayaatka Islaamiga ah (SAWIRRO).
09/01/2021 - 21:42:27
Sawirro: Beesha Jareerweyn ee Jubbooyinka oo Suldaan cusub Caleema saaratay.
05/01/2021 - 08:50:52
Video+Sawirro: Al Shabaab oo soo bandhigay raggii fuliyay weerarkii Manda Bay.
04/01/2021 - 08:00:20
Sawirro: Deegaanka Shaaw oo laga qeybiyay Xoolaha Zakada.
30/12/2020 - 10:39:52
Sawirro: Beesha Xawaadle oo Machad Islaami ah kusoo xiratay Jubbooyinka.
17/12/2020 - 19:33:00
Video+Sawirro: Alkata'ib oo Filim kasoo saartay weerarkii DusitD2 Hotel Nairobi.
13/12/2020 - 17:35:43
Sawirro: Deegaanka Faafaxdhuun oo laga qeybiyay xoolaha Zakada.
09/12/2020 - 15:46:44
Sawirro: Xoolaha Zakada oo laga qeybiyay deegaanka Weelmaaroow.
05/12/2020 - 06:55:33
Sawirro: Gaadiid Dagaal oo ciidamada maamulka Galmudug looga qabsaday dagaalkii Bacaad weyn+Meydadka askartii ladilay.
01/12/2020 - 12:26:45
Sawirro: Mas'uuliyiin katirsan maamulka 'Somaliland' oo galay Kaniisad kutaal Hargeysa.
16/11/2020 - 13:48:32
Copyright © 2009 - 2021 SomaliMemo All Rights Reserved.